ငစနရေဲ့ အပအေတမှေတျတမျးမြား: October 2008
ကြောင်ရေချိုးပေးလိုက်၊ ကြက်ဥကို ကော်ပတ်တိုက်လိုက်၊ ချစ်တီးခေါင်း သန်းရှာလိုက်နဲ့ ဖိုးစနေတစ်ယောက် အလုပ်များချင်တိုင်း များနေပါတယ်။ ပြန်ခါနီးပြီမို့ ဝယ်စရာရှိတာ ဝယ်ခြမ်း၊ အလွမ်းသယ်စရာရှိတာသယ်နဲ့ အားဘူးပေါ့ဗျာ။ ဒီရက်ပိုင်း သူငယ်ချင်းရဲ့ညီတစ်ယောက် ခြင်္သေ့ကျွန်းကိုလာပြီး အလုပ်အကိုင်ရှာဖွေဖို့စီစဉ်နေလို့ တတ်အားသလောက် ကူညီပေးနေတာလေးလဲ ပါပါတယ်။ ဒီချာတိတ် ကိစ္စပေါ်လာတော့မှ သူ့အစ်ကို ဖိုးဇော် တစ်ယောက် ငစနေ့ကို တစ်ခါတုန်းက ချောက်တွန်းခဲ့ပုံလေးသတိရမိပါတယ်။
ဖြစ်ပုံက ဒီလိုပါ။ ဖိုးစနေ ပထမအကြိမ် ခြင်္သေ့ကျွန်းကို ထွက်ဖို့လုပ်နေစဉ်အခါပေါ့။ အကုန်စီစဉ်ပြီးလို့ ထွက်ဖို့ ၁ လတောင်မလိုတော့တဲ့အချိန်မှာ ရုတ်တရက်ပေါ်လာတဲ့ မိသားစုပြဿနာတစ်ခုကြောင့် ခြင်္သေ့ကျွန်းလာမယ့်အစီအစဉ်တွေကို အကုန်ရပ်လိုက်ရပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ပြဿနာက အဲဒီမှာတင် မရပ်ပါဘူး။ လက်ရှိ အလုပ်လုပ်နေတဲ့ ကုမ္ပဏီမှာက ထွက်စာတင်ထားပြီးသားဖြစ်နေပါပြီ။ ခေါင်းမာတတ်တဲ့ ဖိုးစနေရဲ့အကျင့်ကြောင့် ထွက်စာကို ပြန်ရုပ်သိမ်းပေးဖို့လဲ မပြောပဲ နောက်အလုပ်တစ်ခုသာ သဲသဲမဲမဲ ဖိပြီး အပူတပြင်းရှာဖွေရပါတော့တယ်။
တစ်ည သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ လက်ဘက်ရည်ဆိုင်မှာထိုင်ပြီး အလုပ်ကိစ္စကိုခေါင်းချင်းရိုက်ဆွေးနွေးနေတုန်းမှာ ဖိုးဇော်တစ်ယောက် ရောက်ချလာပါတယ်။ စကားဝိုင်းထဲ ဝင်ထိုင်ပြီးတော့ တစ်ခုခုကို ပြောသင့်မပြောသင့် ချိန်ဆနေတဲ့ပုံစံမျိုး လုပ်နေပါတယ်။ နောက်တော့မှ မနေနိုင်တော့တဲ့ပုံစံနဲ့ ပြောချလာပါတယ်။
"ဖိုးစနေ၊ မင်းအလုပ်ကိစ္စ အဆင်ပြေပြီလား"
"ပြေသေးပါဘူးကွာ ... အဲဒါမို့လို့ ဒီမှာ ခေါင်းမီးတောက်နေကြတာပေါ့" ... ကျွန်တော် ပြန်ပြောလိုက်တော့ သူ တစ်ချက် ငြိမ်သွားပြန်ပါတယ်။
ခဏနေတော့မှ စကားစလာပြန်ပါတယ်။ .. "ဒီလိုကွာ ... ခု ငါ့မှာ အဆက်အသွယ်တစ်ခုရှိတယ်။ အဲဒါ မင်းလုပ်ချင်မလားလို့"
"အလုပ်က မင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ အဆင်ပြေမယ်ကွ၊ အဲဒါတော့ ငါအာမခံတယ်" ... ဖိုးဇော်တစ်ယောက် တစ်ကယ် အတည်ပေါက်နဲ့ပြောနေတာမို့ ကျွန်တော်လဲ စိတ်ဝင်စားသွားပါတယ်။
"ရန်ကုန်မှာတော့ မဟုတ်ဘူးကွ။ အလုပ်က နယ်မှာ။ ပြင်ဦးလွင်နားမှာကွာ ... ဒါပေမယ့် ၂ လကို တစ်ပတ် ရန်ကုန်ပြန်လို့ရမယ်" ...
"အလုပ်က တောထဲမှာဆိုတော့ သွားရလာရ အဆင်ပြေအောင် ပါဂျဲရိုးလို ကားတစ်စီးပေးထားလိမ့်မယ်။ မင်းတစ်ယောက်တည်းကို တစ်စီးတော့ မဟုတ်ဘူးပေါ့ကွာ။ မင်းတို့လို အလုပ်လုပ်နေတဲ့သူတွေ ၃ - ၄ ယောက်လောက်ကို တစ်စီးစီ ပေးထားလိမ့်မယ်။" ...
"လခကတော့ များတယ်ကွ ... ခု လက်ရှိ မင်းရနေတဲ့ လခထက် ၃ ဆလောက်ပိုများမယ်။ မင်း စိတ်ဝင်စားရဲ့လား"
ဖိုးစနေ ခေါင်းထဲမှာ အလုပ်များသွားပါတယ်။ သူပြောတဲ့ အချက်အလက်တွေနဲ့ ဒီအလုပ်ကို လုပ်သင့်မလုပ်သင့် ချိန်ထိုးစဉ်းစားနေတုန်း ဖိုးဇော်က စကားဆက်ပြန်ပါတယ်။
"ဒါပေမယ့် စက်ရုံက အစိမ်းဝတ်တွေရဲ့ စက်ရုံဆိုတော့ မင်းလုပ်ချင်မလားလို့ကွာ ... အဲဒါလေးတစ်ချက်ပဲ ငါစိတ်ပူတာ။ ကျန်တာတော့ အကုန်အဆင်ပြေတယ်။"
"အစိမ်းဝတ် စက်ရုံဆိုရင်တော့ နည်းနည်း ပြန်စဉ်းစားရမယ်ကွ။ ဖေဖေလဲ ကြိုက်ချင်မှကြိုက်မှာ .... ဒါပေမယ့်ကွာ ... နောက်ဆုံး ဘာအလုပ်မှ ရှာမရရင်တော့ မင်းပြောတဲ့အလုပ်မှာ ခဏတဖြုတ်လုပ်သင့်ရင်လဲ လုပ်ရမှာပဲ။ ဖေဖေ့ကိုတော့ ကြည့်ပြောရမှာပေါ့။" ကျွန်တော်က တွေးတွေးဆဆတစ်ချက်ပြန်ပြောတော့ ဖိုးဇော်မျက်နှာ ပြုံးသွားပါတယ်။ လက်ဘက်ရည်ဝိုင်းတစ်ခုလုံးလဲ တိတ်ဆိတ်ငြိမ်သက်ပြီး ကျွန်တော်တို့ပြောတာကိုပဲ စိတ်ဝင်တစား နားထောင်နေကြပါတယ်။ ရုတ်တစ်ရက်ကျွန်တော် တစ်ခု သတိရသွားတာနဲ့ မေးချလိုက်ပါတယ်။ "နေပါဦးကွ ... မင်းပြောတဲ့အလုပ်က ဘာလုပ်ရမှာလဲ ... ငါနဲ့ အဆင်ပြေမယ်ဆိုတာရော သေချာရဲ့လား။"
ဖိုးဇော်မျက်နှာ တစ်မျိုးဖြစ်သွားပါတယ်။ ပြီးမှ အမူအယာကို နည်းနည်း ပြန်ထိန်းလိုက်ပြီး ... "မပြေစရာအကြောင်းမရှိပါဘူးကွာ ... မင်း လုပ်နိုင်မယ်ဆိုတာ ငါ သိပြီးသားပါ။ အလုပ်က ဒီလိုကွ ... အနီးစခန်းမှာ သံရည်ကြိုစက်တွေ ရှိတယ် ... အဲဒါမင်းသိတယ်မဟုတ်လား။ အဲဒီမှာ ကြိုပြီးထွက်လာတဲ့ သံရည်တွေကို အပေါ့အငန်မြည်းပေးရမယ်။ အဲဒါလေးပဲ"
တစ်ဝိုင်းလုံး ရုတ်တရက် ငြိမ်သွားပါတယ်။ ပြီးမှ အဖြစ်မှန်ကို အရင်ဆုံး သဘောပေါက်သွားတဲ့ ဟန်မျိုးက တဟားဟားအော်ရီပါတော့တယ်။ အဲဒီတော့မှ ဖိုးစနေလဲ သဘောပေါက်ပြီး ဖိုးဇော်ကို လိုက်ထိုးပါတော့တယ်။ ဖိုးစနေက လိုက် ဖိုးဇော်က လက်ဘက်ရည်ဆိုင်ကို ပတ်ပြေးနဲ့ ဆူညံပွက်လောရိုက်ကုန်ပါတယ်။ ပြေးလို့လိုက်လို့ မောတော့လဲ သူငယ်ချင်းနှစ်ယောက် တစ်ယောက်လည်ပင်း တစ်ယောက်ညှစ် ... အဲလေ တစ်ယောက်လည်ပင်း တစ်ယောက်ဖက်ပြီး ဝိုင်းရှိရာကိုပြန်လာ အကျရည်ခါးခါးကို အတူတူထိုင်သောက်ကြတာပေါ့ဗျာ။ ငယ်တုန်းက သူငယ်ချင်းတွေ နဲ့အတူတူ ပျော်ရွှင်ခဲ့ရတဲ့ရက်တွေ ပြန်ပြီးအောက်မေ့ပါရဲ့။
written by ငစနေ at 2:53 PM
Happy Birthday Mom, ... but hey, my mom's birthday was last Friday, 10th of October.
I called mom early in the morning to wish her happy birthday. But she's not very well. Not so serious, just havingaseasonal flu. As it's mom's birthday I putamessage "Happy birthday Mom! I love you!" on my GTalk status. Then Tim, my new Singaporean friend asked me withasurprise "Hey, is it really your mom's birthday today?". I answered him "Yes! Of course!!!" . He said "Wow! ... it's really cool. Bcoz today is my mom's birthday also!"
Well, I can't be more delighted than him. We wish each other's mom's birthday in return. Well, at least, It's good to haveafriend whose mom's birthday is same as my mom.
written by ငစနေ at 11:22 PM
I'm doing some bug-fixing and debugging of my old projects at office. Major updates and changes has been finished. So, I got some time to write blog posts again. What's happened to me at home? I'm washing and ironing my cloths!!! No joke, it's serious.
The old washing machine provided by my landlady has been acting strangely last few weeks and it took4~6hrs to finishaload of laundry. And last week, it cannot finish anything anymore. So my flat-mates went to electronic shop to buyanew washing machine. I'mabit surprised (well,abit astonished also) to see them coming back empty handed but when I heard that they've madeadelivery order, I'mabit delighted. (thanks mates, for taking the trouble to go and buy the machine :-) ) Yes, I haven't done my laundry jobs for the whole week because of that stupid old washing machine and all of my freshly washed clothes are nearly out of stock to wear. I'm really longing to haveanew washer as soon as possible.
My wish has been fulfilled on last Wednesday. When I arrived back home from work, I sawanew washing machine. So, that night, I did2loads of laundries. Well, there come some problems! All of my flat-mates are in same situation with me about their laundries and they arrived back home earlier than me, so they've already done all their loads and already hanged the clothes full on the cloth line. There's no place left for me. :( so I've been forced to switch on the special function of our newly bought machine "The Wash and Iron". Yes, you washed, and when the machine stops, you take it out and iron directly, no hanging needs.
My old fashion about washing and wearing is, I wash, and then I hang the clothes, and when I want to wear, I took it out of the cloth line, iron it and wear. So I don't need to pay great amount of time to do the ironing. Now, I've got to iron the clothes again and I found out that it takes more time to ironadamp shirt than when it's dried. No choice, I've got to do it. And I think I've got to do it in future also. Why? Because one of my flat-mates haveahabit of getting up early in the morning and cook the breakfast (mostly fried rice). So when he finish cooking, all the clothes hanged on the cloth line are smelled with his fried rice. :( ... so, no way of hanging them again. Wash and iron! Okay, ciao, see you again.
written by ငစနေ at 10:57 AM
written by ငစနေ at 10:30 AM